Maxkamad ku taala waddanka Mareykanka oo 8sano ku xukuntay Nimco Cali Yuusuf
Calafornia :-Maxkamad ku taala waddanka Mareykanka gaar ahaan magaalada San Diego ayaa waxay 8 sano oo Xarig ah ku xukuntay mid ka mid ah gabdhaha Soomaaliyeed ee gacan qaban jiray agoonka oo la yiraahdo Nimco Cali Yuusuf waxaana ay maxkamada ku eedeysay in ay lacag lagu taageerayo Ururka Al-Shabaab ay ka gurtay gudaha dalka Mareykanka.
Xeerilaaliyaha dacawada ku soo oogay Nimco Cali Yuusuf ayaa ku dooday in Nimco lacag badan u gurtay Ururka Al-Shabaab waxaana uu soo jeediyey in xabsi daa,in lagu xukumo balse dood dheer ka dib ayaa Nimco Cali Yuusuf waxaa lagu xukumay 8sano oo xarig ah.
Nimco Cali Yuusuf ayaa waxay maxkamada ka sheegtay in ay agoon u dirtay 1450$ balse aysan wax lagu taageerayo Ururka Al-Shabaab aysan dirin waxaana maxkamada ay ku dooday in ay heyso codad iyo xiriiro ay sameysay iyaga oo qoraal ahaa uga akhriyey Maxkamada.
Nimco Cali Yuusuf ayaa waxaa ay xabsiga ku jirtay ku dhawaad laba sano waxaan alle uga baryeynaa in alle ka soo daayo Nimco iyo walaalaha kale ee gardarada ugu xiran dalka Mareykanka iyadana alaha ku irsaaqo sabar iyo iimaan.
Maxkamada ku taalla magaalada Illinois ayaa ku xukun 10 sano oo xarig ah ku riday Shaker Masri 00 29 jir ah waxayna ay ku eedeysay inuu qorsheynayay weeraro dad badan ku dhintaan in uu fuliyo isaga oo rabay in uu ku biiro Ururka Al-Shabaab tababarna ku soo qaato gudaha dalka Soomaaliya.
Yuusuf Ahmed Cali